शताब्दीको अन्त्यसम्म अन्टार्कटिका २ ice% कम हिउँ हुन सक्छ | नेटवर्क मौसम विज्ञान
ध्रुवीय क्षेत्रहरू, हिउँले ढाकिएको, ग्लोबल वार्मिंगको सबैभन्दा कमजोर हो। आर्कटिक र अन्टार्कटिका दुबै ठूला परिवर्तनहरू हुँदैछन्। अन्टार्कटिकाको विशिष्ट अवस्थामा, बरफ मुक्त क्षेत्र विस्तार हुनेछ र ती बरफ पग्लिए पछि सँगै आउँछन्।
अस्ट्रेलिया अन्टार्कटिक डिभिजन (AAD) को नयाँ अध्ययन अनुसार, जुन पत्रिकामा प्रकाशित भएको हो प्रकृतिशताब्दीको अन्तमा सेता स्वर्गमा त्यहाँ करिब २ 25% कम बरफ हुन्छ; त्यो हो लगभग १,,२17.267। वर्ग किलोमीटर जग्गा प्राप्त गर्नेछ.
भविष्यमा अन्टार्कटिकाको यात्रा गर्न चाहनेहरूका लागि यो अहिले भन्दा पक्कै सजिलो हुनेछ। तर, यसले पग्लिन सक्ने परिणामहरू के हुन सक्छ? खैर, हामी सबैलाई थाहा छ सबै भन्दा स्पष्ट एक हो समुद्री सतह वृद्धि। सबै पग्लने बरफ कतै जानु पर्छ, र स्पष्टतः यो समुद्रमा जान्छ।
सहस्राब्दीको अन्ततिर, ग्रह पृथ्वी धेरै, धेरै भिन्न हुनेछ, यसको समुद्रहरू जस्तै तिनीहरू बढेको 30० मिटर हुनेछ, र अहिले १०,००० वर्षसम्म जब अन्टार्कटिकामा हिउँ छैन भने, यो बृद्धि 10.000० मिटर हुनेछ सिंक एजेन्सी कार्नेगी संस्था fos विज्ञान मा अनुसन्धानकर्ता (संयुक्त राज्य अमेरिका) केन Caldeira।
यसका गम्भीर परिणामहरू बाहेक अन्टार्कटिकामा यस ग्रहको बाँकी भागमा पनि पर्नेछ दुबै देशी र आक्रामक प्रजातिहरू फैलिनेछ। प्रकृतिमा जहिले पनि हुन्छ, त्यहाँ बाँच्नको लागि लडाईहरू हुनेछ, र स्पष्ट रूपमा सबै भन्दा राम्रो अनुकूलित जीत हुनेछ। यसको मतलब यो हो केही देशी प्रजाति लोप हुन सक्छ.
हाल बरफ मुक्त क्षेत्र, एक वर्ग किलोमीटर देखि लेकर हजारौं सम्म, छन् प्रजनन क्षेत्र सिलहरू र समुद्री पक्षीहरूको लागि, तर तिनीहरू स्थानिक ईन्टरटेब्रेट्स, फgi्गी र लाइचेन्सको घर पनि हुन्। समयको क्रममा तिनीहरूले अन्ततः सम्पूर्ण महादेश उपनिवेश गर्न सक्दछन् र हामीलाई फेरि आश्चर्य लाग्छ कि भनेर फेरि चिनिन्छ। किनकि यो 50 करोड वर्ष पहिले थियो.
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » शताब्दीको अन्त्यसम्म अन्टार्कटिका २ 25% कम बर्फबिना छोडियो